Madxafku wuxuu xooga saaray Taageerida Fannaaniinta Gobolka
Meelaha Matxafka Farshaxanka waxaa ka go'an in ay bixiso xarun nololeed hal abuur leh oo ka jirta beelaha xuduudaha ee Fargo, ND, iyo Moorhead, MN, iyagoo bixiya waaya-aragnimo macno leh oo ku yaalla xaafadaha, studios, iyo barnaamijyada. Waxay ka muuqdaan bandhigyo farshaxan casri ah, fasalo, casharo, istuudiyo, wada shaqeyn, aqoon isweydaarsiyo, munaasabado gaar ah, iyo bandhigyo. Matxafku wuxuu soo bandhigaa farshaxanada gobolka ee ka shaqeeya, kuwa ka soo baxaya kuwa leh xirfado leh tobaneeyo sano. Boqolaal farshaxanayaal ah ayaa lagu soo bandhigay bandhigyo halkan sanadkiiba, iyo laba bandhigyo oo dhowaan muujinaya baaxadeena.
Bandhigga Iskuduwidda Caduudka: Casriga casriga ah ee Minnesota iyo Waqooyiga Dakota waxay isu keeneen in ka badan 75 farshaxan oo ka kala yimid labada dawladood. Matxafka wuxuu la shaqeeyaa Xarunta Qaranka ee Waqooyi-Galbeed ee Minneapolis (NCC) si uu u soo bandhigo shaqada cusub ee majaladaha hogaaminaya ee ka soo jeeda gobolka oo dhan oo riixaya xuduudaha dhexdhexaad ah ee dhexdhexaad ah. Wadashaqeyn lala yeeshay NCC waxay sidoo kale dhiirigelisay hay'adaheena markii aan dhawaan dhistay Robert Kurkowski Ceramics Wing. Inta lagu gudajiray bandhigga, Matxafku wuxuu bixiyay dhowr xafiis oo galabta ah iyo wadahadallo studio oo lagu soo bandhigayo farshaxanno farshaxan oo ka yimid kuliyado degaaneed kuwaas oo wadaagay fikrado iyo falcelin si ay ugu shaqeeyaan bandhigga, oo ay ku xigto bandhigyo farsamooyin dhejis ah oo ka jira istuudiyaha ceramics.
Farshaxanno yaryar ayaa muhiim u ah in ay fikrado cusub ugu gudbiyaan gudaha bulshada. Iyadoo Jiilkeyga, Kaga Qaadi Doono: Soo Bandhigida Fargo-Moorhead, matxafku wuxuu soo bandhigay koox cusub oo ah sideed dhallinyaro farshaxan oo ka shaqeeya warbaahin ballaaran. Qaar badan oo ka mid ah shaqooyinka kala duwan waxay ku saleysan yihiin sida aan ula xiriirno teknoolajiyada iyo sidoo kale midba midka kale, oo ay ku jiraan rakibaadda iyo farshaxanka ka qaybqaadashada si ay ula qabsadaan oo ay uga doodaan dhagaystayaasha. Iyada oo la siinayo fannaanyahanadan iyo kuwa kale ee soo baxaya waxay ubadkoodu yahay codkooda ugu quruxda badan, matxafku wuxuu ka caawiyaa barashada iyo dhiirigelinta tayada cusub marka ay bilaabaan xirfadahooda.